people Nepal » आजको राशिफल : मंसिर ११ गते / नोभेम्बर २७ तारिख सोमबार आजको राशिफल : मंसिर ११ गते / नोभेम्बर २७ तारिख सोमबार – people Nepal
आजको राशिफल : मंसिर ११ गते / नोभेम्बर २७ तारिख सोमबार
Posted on November 27, 2017 by Tara Nidhi
श्री शाके १९३९ बि. स. २०७४ साल मार्गशिर्ष ११ गते सोमबार इश्वी सन २०१७ नोभेम्बर २७ तारीख मार्गशिर्ष शुक्ल पक्ष नवमी तिथी चन्द्रमा कुम्भ राशिमा सुर्य दक्षीणायन हेमन्त ऋतु धनगढी दुर्गाजाँत तथा डोटि पोखरीजाँत , पाङ्गा वैष्णवदेवियात्रा-
कलाकौशलका क्षेत्रबाट मनग्य लाभ प्राप्त हुनेछ । अध्यन अध्यापनमा समय ब्यतित गर्दा उत्तम साबित हुनेछ । प्रिय ब्यत्तिसगँको भेट घाटले मन हर्शित तुल्याउला । पारीवारिक साथ सहयोगमा नयाँ कार्यको प्रारम्भ हुने सम्भाबना रहेकोछ । ब्यपार ब्यवसाय मध्यम रहला ।
शुभ चिन्तकहरुको साथ सहयोग द्वारा अधुराकार्यहरु सम्पादित हुनेछन । सामाजिक कार्यमा अग्रसर रहनाले मान सम्मान प्राप्तीको योग बन्नेछ । गरीरहेको कार्य क्षणिक रुपमा परीर्वतन गर्नु पर्ने समय रहेकोछ । स्वास्थमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुनसक्नेछ ।
सामान्य कार्य सम्पादनमा अधिक श्रम खर्चनु पर्ने समय रहेकोछ । मित्रजनहरुको साथ सहयोगमा नयाँ कार्यको प्रारम्भ गर्न उत्तम समय रहेकोछ । अरुको पुर्ण बिश्वासमा गरीएका कार्यले अपजस दिलाउनेछ । यात्रामा साबधानि अपनाउनु उत्तम रहनेछ ।
स्थान परीर्वतनको सम्भाबना रहेकोछ । बाणीका कारण सामान्य वादबिवादको झमेलामा फसिएला । बिश्वासिला ब्यत्तिहरुबाट धोका हुनाले मानसिक तनाबको सामना गर्नु पर्नेछ । शुभचिन्तकहरुको माध्यम बाट आम्दानिका श्रोत हरु सबल तुल्याउन सकिने समय रहेकोछ ।
जिवन साथिको साथ सहयोगमा ब्यपार ब्यवसायमा मनग्य लाभ प्राप्त हुने समय रहेकोछ । आर्य आर्जनका निम्ती सामान्य यात्रा निम्त्याउने समय रहेकोछ । समयमा गरीएको सहि निर्णय उत्तम साबित हुनेछन । सामान्य कार्य सम्पादनमा अधिक समय ब्यतित रहला ।
मानसिक चन्चलताका कारण नजिकका मित्रजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । प्रतिश्पर्दा जन्य कार्यमा बिशेष सजग रहनुहोला । स्वास्थ क्षेत्रमा सामान्य सुधार आउन सक्नेछ । मनोरञ्जनका निम्ती सामान्य यात्राको योग बन्नेछ ।
अध्यन अध्यापनमा अधिक समय ब्यतित गर्नु पर्ने समय रहेकोछ । आफुभन्दा सानाको स्वास्थमा देखिएको समस्या जटिल बन्नाले सामान्य तनाब आई पर्नेछ । आय आम्दानिमा बिशिष्ठ ब्यत्तिहरुको सहयोग प्राप्त रहनाले उत्तम रहनेछ । कलाकौशलका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ ।
पारीवारिक सम्बन्धमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । सवारी साधनको प्रयोगमा बिषेश साबधान रहनु पर्ने समय रहेकोछ । तपाई द्वारा सम्पादितकार्य चर्चा योग्य साबित रहनेछ । सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सरिक हुने सम्भाबना रहेकोछ । ब्यापार ब्यवसाय मध्यम रहला ।
यात्राकारक समय रहेकोछ । मित्रजनहरुको साथ सहयोगमा अधुराकार्यहरु सम्पादित हुने योग रहेकोछ । कार्यसम्पादनको उत्तम श्रेय तपाईलाई प्राप्त रहनाले मन हर्शित रहनेछ । तपाईको आलोचना गर्ने ब्यत्तिहरुको कमि नरहला । भोजभतेर जन्य कार्यमा सरीक हुने योग रहेकोछ ।
स्वास्थ क्षेत्रमा सामान्य सुधारको योग रहेकोछ । बाणीका कारण सामान्य वाद विवादको सामना गर्नु पर्ने समय रहेकोछ । स्थीर क्षेत्रमा गरीएको लगानि दिर्घकालिन आम्दानिको श्रोत बन्नेछ । प्रिय मित्रजनहरुसगँको भेटघाटले मनमा प्रशन्नता दिलाउनेछ ।
कार्यसम्पादनमा आएको असहज परीस्थीतिहरु सुधार उन्मुख रहनेछन । प्रभाबशालि ब्यत्तित्वको बिकास हुनेछ । कार्य सम्पादनमा आटँ र शाहसको बृद्यि हुने समय रहेकोछ । जिवन साथीको साथ सहयोमा नयाँकार्यको थालनि हुने समय रहेकोछ ।
तात्कालिक खर्चको कारण सामान्य आर्थीक अभाबको सम्भाबना रहेकोछ । गैर ब्यत्तिहरुको बिश्वासमा कार्य नसुम्पीनु उत्तम रहनेछ । मित्रजनहरुको प्रशन्नताका निम्ती अधिक समय खर्चनु पर्नेछ । प्रतिश्पर्दा जन्य कार्यमा अब्बल स्थान प्राप्त रहनाले मन प्रशन्न रहला ।